Metal mesh ukwenziwa
ngomphathi ku 18-11-21
IHoud Industrial International Limited (HOUD) ngumvelisi ophambili wentsimbi kunye nesidibanisi samandla. I-HOUD yinxalenye yeqela le-NBC. Isekwe kwisiXeko saseDongguan, China, kunye neeofisi eShanghai, eDongguan (HOUD), eHong Kong nase-USA. HOUD Siye saseka p ixesha elide ...
Isisombululo soLwakhiwo lweeNdlebe
ngomphathi ku 18-08-21
Ngenkqubela phambili yamaxesha, imfuno yabantu yee-headphone ayisayi kuphinda yaneliswe ziingoma ezilula kodwa imisebenzi engaphezulu yentloko. Ibango loMthengi liya kukhuthaza iimveliso zentloko kwi-wireless kunye nolwalathiso olukrelekrele, kubandakanya ukusebenzisana kwelizwi, n ...